न्युजर्सी ओसन टाउनसिपमा बस्दै आएकी ८९ बर्षकी ग्लेन क्रिस्टी गोल्डेंथलको घर गत सेप्टेम्बर ९ मा अचानक लिलाममा राखियो । उनले ६ सेन्टस ट्याक्स तिर्न छुटेको रहेछ । अल्जाइमर रोगकी बिरामी उनलाई उक्त रकम तिर्न छुटेको पनि याद थिएन ।
ओसन टाउनसिपका अधिकारीहरुले उनको घर लिलाममा राखेपछि उनी निकै आत्तिइन् । उनले तिर्न बाँकी ६ सेन्टसको ब्याज र प्रशासनिक खर्च गरी झण्डै ३ सय डलर पुगेको रहेछ ।
२०१९ मा तिर्न छुटेको ६ सेन्टसका कारण घरबाट आफ्नी आमालाई निकाल्न लागिएको भन्दै उनकी छोरी लिसा सुहेले टिकटकमा भिडियो राखिन् । उनले ओसन टाउनसिपका अधिकारीहरुलाई फोन गरेर ६ सेन्टसका कारण घर लिलाममा राखेको भनेर सोधिन् । उनीहरुले ‘हो’ भनेर जवाफ दिए ।
८९ बर्षकी बृद्धाले अल्जाइमरका कारण आफूले तिर्न बाँकी रहेको ६ सेन्टस बिर्सेकी रहिछन् । छोरी लिसाले आमाको घर बचाउन विभिन्न निकाय र त्यहाँका मेयरलाई समेत फोन गरिन् । ६ सेन्टसका लागि कसैको घर लिलाममा राख्नु लज्जास्पद रहेको त्यहाँका मेयर क्रिस्टोफर सिसिलियानोले बताए ।
मेयरले माफी माग्दै प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । नियमित रुपमा रकम बुझाउँदै गएपनि विगतमा छुटेको रकमका कारण घर लिलाममा राख्ने अवस्था आउने र यो कम्प्युटर प्रणालीका कारण हुने मेयरले बताए ।
मेयरले राज्यका अधिकारीहरुसँग सम्पर्क गरेर कति रकम ट्याक्सबापत तिर्न बाँकी रहेको खण्डमा घर लिलाममा राख्न सकिने भन्ने सन्दर्भमा सिमाबन्दी सहितको नियम पारित गर्न आग्रह गरेको बताएका छन् । मेयरले सिनेटर विन गोपाललाई सम्पर्क गरेर यसबारे कुरा गरेका थिए ।
बृद्धाकी छोरी लिसाले ६ सेन्टसका लागि घर लिलाममा राख्नेले व्यवहारिक रुपमा सोंच्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेकी छिन् । उनले बाँकी रहेको ६ सेन्टस ट्याक्स पनि तिरिदिएकी छिन् ।
तर कागजपत्रको प्रकृया झन्झटिलो हुने भएकाले बृद्धाले आफ्नी छोरीलाई बारम्बार फोन गर्दै सोधेकी छिन् -‘मेरो घर गुम्ने त होइन? मैले मेरो सामान प्याक गर्नुपर्ने हो र ? म अब कहाँ गएर बस्ने होला ?’
ती बृद्धासँग घरको रकम तिर्नका लागि पैसा पनि थियो । तर उनी प्रणालीको शिकार भएकी हुन् । प्रणालीको कमजोरीका कारण महामारीका कतिजना व्यक्ति पीडित भए होलान् ? लिसाले चिन्ता व्यक्त गरिन् ।